Bishii Febraayo 2019, Mr. Lin Yuanzhong, oo ahaa shaqaale hore oo ka tirsan Shirkadda Changheng, ayaa nasiib darro la xanuunsaday kansarka sanbabada. Hogaamiyaha shirkada ayaa ku wargaliyay dhamaan shaqaalaha ka tirsan kooxda WeChat ee shirkada isla markaana ku tabarucay sida ugu dhakhsaha badan. Shaqaaluhu sidoo kale waxay si firfircoon uga qaybqaateen deeqda iyo ...
CORBITION wuxuu kaqeybgalay Carwadii 8aad ee Shiinaha (Shanghai) Carwada Caalamiga ah ee Soo Dejinta iyo Dhoofinta
Shirkada CORBITION waxaa la gudoonsiiyay cinwaanka shirkada canshuurta bixisa ee Shanghai. Tani waa xaqiijinta tiknoolajiyada 'CORBITION', laakiin sidoo kale soo celinta dhammaan shaqaalaha CORBITION bulshada. In la soo dhaafay 8-aad Shiinaha (Shanghai) International Technology Import iyo dhoofinta Carwada, waxyaabaha our ...
FADHIGA Xisbiga Sannadka Cusub
In Bandhigii Gu'ga ee 2020, si loola dagaallamo COVID-2019, Shirkadda CORBITION waxay heshay tilmaamo ka yimid dowladda ay khuseyso si ay u diyaariso dib u bilaabista wax soo saarka hore. Maqnaanshaha kheyraad iyo shaqaale, Mudane Ge Bingda, guddoomiyaha shirkadda, wuxuu shaqeynayay maalin ...